आलु: आफ्नो गर्मी घरेलु मा खेती र मर्मतका
आलु - जो बिना कुनै पनि देश साइट सक्नुहुन्न संस्कृति। यो बोट परिवारको राम्रो बाली प्राप्त Solanaceae खेती प्रविधी संग कृषि गतिविधिहरु को एक किसिम र अनुपालन समावेश छ।
पहिलो, तपाईंले ठीक लागि tubers तयार गर्न आवश्यक रोपण। आलु खेती र हेरविचार जो विशेष जटिलता फरक छैन, यसको Tissues मा समावेश गर्ने SOLONIN घटनाको Rot थप प्रतिरोधी छ। त्यसैले, पनि शरद ऋतु मा tubers भूदृश्य हुनुपर्छ। यसो गर्न, तिनीहरूले दुई बारेमा सप्ताह लागि घाम स्थानमा बाहिर राखिएको छन्। यो समयमा, तिनीहरू धेरै पटक भन्दा बढी गरियो। मात्र एक स्वस्थ, नियमित आकार रोपण लागि प्रयोग रोपण सामाग्री। यस मामला मा tubers को अधिकतम वजन 60-100 ग्राम क्रम छ
वसन्त आलु अङ्कुराउन गर्न आवश्यक छ। रोपण तिनीहरूलाई तहखाने हटाइएको र कोठा हावा तापमान को भुइँमा एक तह मा राखे अघि यो महिनाको लागि कम्तिमा 18 ° सी यसरी दुई हप्ता खडा गर्न आलु। तापमान त्यसपछि 10-15 ° सी मा कम थियो अंकुरण को सूत्रपात पछि एक महिना रोपण सुरु गर्न। आलु जस्तै बोट को एक पहिले बाली प्राप्त गर्न त सजिलो। भविष्यमा खेती र ख्याल hilling, harrowing, weeding, हजारी र रुचाउने हुनेछ।
गिरावट भागमा लगभग 35 सेमी गहिराई मा। कि अघि, धरण वा मल 40 किलो को स्क्याटर मा 10 मिटर2खन्नुहोस् गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, अर्को वर्ष थप सरल हुनेछ लागि आलु हेरचाह। यसबाहेक, यो लागू र गर्न सम्भव छ खनिज पूरक - 300 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट (अमोनिया) र अमोनियम सल्फेट, र एक पाउन्ड superphosphate। एक आलु क्लोराइड मल बनाउन अनुमति छैन।
।। Tubers माटो 6-10 सेमी को ब्रश बीच पङ्क्तिहरू दूरी लगभग 30 सेमी र पङ्क्तिहरू बीच हुनुपर्छ मुर्दा गाड्नु - 65 सेमी यो योजना गर्न Adhering, यो यस्तो आलु रूपमा राम्रो बाली बिरुवाहरु बढ्न सम्भव छ। खेती र हेरविचार, माथि उल्लेख रूपमा, अब सिंचाई र hilling मा पहिलो उदाहरण हुनेछ। पहिलो पटक तपाईं पहिलो मार पनि अघि देखा माटो खुकुलो पार्नु आवश्यक छ। यो घटना तान्नु नियन्त्रण मामलामा सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिन्छ। यो चरण छोड्नुहोस् आवश्यक छैन। अन्यथा, भविष्यमा आलु क्षेत्रमा अनावश्यक वनस्पति को छुटकारा गर्न कठिन हुनेछ।
अंकुरण पछि (लगभग 15 सेमी को एक उचाइ मा) बारम्बार साथ बाहिर loosening ब्रश podokuchivaya। यो माटो मा हावा परिसंचरण सुधार हुनेछ र tubers अझ छाडा तह मा विकसित हुनेछ। बारेमा बीस दिन पहिलो loosening पछि - आलु खेती र हेरविचार जो पनि पर्याप्त पानी समावेश, सिजन फेरि hilling।
क्रप पानी हाले दुर्लभ, तर धेरै प्रशस्त छ। माटो कम्तिमा 50 सेमी गहिरो लागि भिगो गर्नुपर्छ। निश्चित हुनुहोस् आलु पानी को बिरुवाहरु फूल कहिले र फूल पछि, तुरुन्तै अंकुरण पछि।
यी प्रविधी निम्न गरेर, तपाईं यस्तो आलु रूपमा राम्रो बाली बिरुवाहरु बढ्न सक्छ। ख्याल र बढ्दै तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, बीउ, hilling र पर्याप्त पानी को उचित तयारीमा मुख्यतया छन्।
क्रप - गतिविधिको कि प्रकार के? शाखा र बाली उत्पादन
कसरी जाडो अंगूर लागि लुकाउन: सुझावहरू
कुखुरा पाल्नु Brahma चिकन: वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा
Cultivators रूसी उत्पादन "तिल" र "सलाम": समीक्षा
रेस्टुरेन्ट "Fianit" (इर्कुत्स्क) - एक किफायती मूल्य मा राम्रो खाना
रिटवभ रेस्टुरेन्टहरू: सर्वश्रेष्ठ रेष्टुरेन्टको अवलोकन
Marinated skewers: विकल्प को ठूलो - स्वाद मा चयन!
हक्की खेलाडी सर्गेई Zubov: जीवनी, उपलब्धि, कोचिंग
संगीत दर्ता - यो ... शब्द को अर्थ र परिभाषा
नयाँ वर्षको कर्पोरेट कहाँ खर्च गर्ने?
"Libriderm" - ओभरकोट देखि रोल peeling। समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
Meatballs संग सूप कसरी खाना पकाउनु
रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ
सरल अझै राजा वा रानी मा अनुमान लत: तपाईं विवाह गर्नुहुन्छ?
मार्क काभेनडिश - मानिसको आइल बाट Sprinter